मुटु स्वस्थ राख्न हरेक दिन ३ कप कफी | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २५, २०७८ chat_bubble_outline0
मुटुलाई स्वस्थ राख्न हरेक दिन ३ कप कफी पिउन जरुरी छ । हरेक दिन ३ कप कफी पिउँदा २१ प्रतिशत स्ट्रोक र १७ प्रतिशत हृदयरोगको खतरा कम हुन्छ । ​हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टस्थित सेमेल्भिस युनिभर्सिटीमा गरिएको अनुसन्धानले कफी र मुटुबीचको सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ ।
उक्त अनुसन्धानको क्रममा कफीले कसरी मुटुलाई स्वस्थ राख्छ ? कति कप कफी पिउनु स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको थियो । युकेको बायोबैंकमा रेकर्ड भएका ४ लाख ६० हजार व्यक्तिहरुमाथि गरिएको अनुसन्धानमा कफी पिउने र नपिउने व्यक्तिमा कफीको प्रभाव र नपिउने व्यक्तिको अवस्थाको बारेमा खुलासा गरिएको छ । जसले जुन व्यक्तिले हरेक दिन ३ कपसम्म कफी पिउने गर्दछ उनीहरुको मृत्युको खतरा १२ प्रतिशत कम हुन्छ । भने, हृदयघात हुने सम्भावना १७ प्रतिशत कम हुन्छ । साथै, २१ प्रतिशत व्यक्तिमा स्ट्रोकको खतरा कम हुन्छ ।